काठमाडाैं | मंसिर २१, २०७८
भनिन्छ, क्रोध मानिसको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । यसैका कारण कैयन सम्बन्धहरु टुटेका उदाहरण पनि छन् । यसकारण रिसलाई सही समयमै नियन्त्रणमा लिनुस् ।
रिसले सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्धमा त असर पर्छ नै, हाम्रो स्वास्थमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्छ । आज हामीले रिसाउँदा मानिसको शरीरमा पर्ने ७ वटा असरका बारेमा उल्लेख गरेका छौं ।
१ रिसाउँदा मानिसको मस्तिष्कमा यस्तो रासायनिक तत्व बन्दछ, जसले शरीर तथा मस्तिष्कमा असर पार्छ ।
२ आँखा रातो हुन्छ, अनि मुटुमा पनि जलन पैदा हुन्छ ।
३ ब्लड प्रेशर एक्कासी उच्च हुन्छ । र आक्रामक भावना उत्पन्न हुन् ।
४ सोच–विचारको शक्ति कमजोर हुन्छ ।
५ तनाव बढ्छ ।
६ लगातार रिसाउँदा पाचन प्रणालीमा नराम्रो असर पर्छ । पाचनतन्त्र कमजोर हुन्छ, जसका कारण एसिडिटी, कब्जियत, भोक नलाग्नेजस्ता समस्याहरु देखिन थाल्छन् ।
७ निद्रा हराउन थाल्छ, यसले तपाईंको आयु घटाउँछ भने जवानीमै बुढो देखिन थाल्नुहुन्छ ।
यसरी छुटाउनुस् रक्सीको ह्याङओभर....
यदि तपाईंलाई आफ्नो पेट र कम्मर सानो बनाउने चाहाना छ? त्यसाे हाे भने शारीरिक अभ्यास मात्र होइन, आफ्नो खानपानमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। जुन खानामा सुगर, कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ, त्यस्तो खाना तुरुन्त ब...
यी ६ लक्षण देखिए भने बुझ्नुस् इम्युनिटी भएछ कमजोर, कोरोनाबाट बच्नुस्
कोभिड महामारी चलिरहँदा इम्युनिटीमा एकदमै ध्यामन दिनुपर्ने भएको छ । तर कतिपय मानिसलाई इम्युनिटी सिस्टम कमजोर भएको थाहै हुन्न । यहाँ हामी इम्युनिटी कमजोर भएको लक्षणहरू बताउनछौं । रुघाखोकी वयस्क मा...
ललितपुरमा १५ हजारले कोरोनाको तेस्रो खोप ( बुस्टर डोज) लगाएका छन् । जिल्लामा रहेका ६ स्थानीय तहमा मंगलबार र बुधबार विभिन्न क्षेत्रका फ्रण्टलाइनरलाइ कोरोना विरुद्ध बुस्टर डोज लगाइएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय ललितप...
यसरी बनाउनुस् गाजर र ओखरको बर्फी
जाडोमा गाजर र ओखरको बर्फी खान स्वादिलो हुन्छ । यहाँ हामी त्यसको रेसिपी बताउँदैछौं । सामग्री गाजर आधा किलो घ्यु तीन ठूलो चम्चा अलैंची ४ वटा सुकेको नरिवल (झुरा पारेको) दुई ठूला चम्चा ...
कोरोना विरुद्धको निःशुल्क खोप बेचबिखन गर्नेलाई कारबाही हुने
सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अवैधरूपमा बेचबिखनको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बुधवार सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरस विरुद्धको खो...
मौसम परिवर्तनको समय शुरू भएसँगै धेरै मानिसहरूमा मौसमी रुघाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ । यससँगै कोरोनाको पछिल्लो भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण पनि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । आममानिसले आफूलाई भएको संक्...